[I-log yokufaka] Uyifaka kanjani i-Antergos futhi ungafi uzama | Kusuka kuLinux
Sanibonani nonke, ngizokhuluma ngendlela yokufaka Antergos Linux eziyikhulu, ake siqale.
1.- Uma ucabanga ukuthi usuvele uyilandile i-Antergos, qala ku-CD, lapho isikrini sokwamukela sivela, chofoza inketho yokufaka imidwebo.
2.- Sikhetha ulimi lweSpanishi.
3.- Sinenketho yokufaka i-Third Party Software njengaku-Ubuntu 😀
4.- Izokucela ideskithophu ofuna ukuyifaka, kimi ngakhetha i-XFCE.
5.- Izikrini ezilandelayo zizofana naku-Ubuntu, zibuze ukwahlukaniswa, indawo yesikhathi sekhibhodi kanye nomsebenzisi.
6.- Ngemuva kwalokho izokukhombisa isethulo sezithombe eziyi-6 ngenkathi ifakiwe, Qaphela ukuthi ukufakwa kuzothatha isikhathi ngoba kufakwe kwi-Intanethi ngoba ingaphambili ne-GUI GTK yesifaki esidala se- I-Arch Linux.
7.- Uma siqala kabusha izovela kwimodi yokugcina, ngoba ayikho i-X ngoba akukho mshayeli ofakiwe, kepha lokhu kungaxazululwa ngomyalo:
futhi ngalokhu sekuvele kuyasebenza.
8.- Manje ngaphakathi kwendawo yakho yedeskithophu usukulungele ukufakwa kokuthunyelwe.
Kuyadingeka uku I-GNOME y I-Cinnamon ukufaka: i-gnome-network-manager nezinye izinhlelo zokusebenza eziyisisekelo ezifana ne-EOG, Telepathy nezinye ezivela I-PacmanGX4, isiphetho sangaphambili sePacman, umphathi wephakheji we-Antergos.
Singafaka futhi ngokuzithandela (XFCE) iphakheji ye-Whisker Menu.
I-LibreOffice enezithonjana zeFaenza
Landa kusuka lapha iphakethe le-zip eliqukethe amaphakethe wezithonjana amaningi.
Vula i-Faenza kusuka kukhetho lwesibili olwe-LibreOffice 4.1 njenge-Root (qala ngokugcina iphakheji ye-zip kufolda yakho yokulanda bese uyivula njenge-Root) bese uyihambisa nomphathi wakho wefayela ku / usr / lib / libreoffice / share / config /.
Ku-LibreOffice iya ku-Amathuluzi> Izinketho> buka futhi lapho lapho ithi khona uhlobo lwesithonjana khetha ingilazi bese uya kokuthuthukile ewindini elifanayo bese unika amandla inketho yokusebenzisa ibha eseceleni.
Susa ibha yefomethi.
Uma bekwenza kahle, kufanele kubukeke kanjena, lena yi-Antergos XFCE yami:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » [I-log yokufaka] Uyifaka kanjani i-Antergos futhi ungafi uzama
"Uma siqala kabusha, izovela kumodi yokugcina, ngoba ayikho i-X ngoba akukho mshayeli ofakiwe"
I-WTF? Ngiyifakile futhi impela kukhona i-X. Kuzo zombili i-laptop naku-AMD + NVidia tower.
Mhlawumbe okwenzeka kuSergio kwakuhluke ngokuphelele. 😉
Eqinisweni i-elav, ngiyifakile amahlandla ama-3 ngeCinnamon nalokhu ngeXFCE futhi kuhlale kufana ukufaka abashayeli ngemuva kokuyifaka
Impela yisiphazamisi isifaki esinaso.
"Qaphela ukuthi ukufakwa kuzohamba kancane ngoba kufakwe kwi-Intanethi ngoba ingaphambili ne-GUI GTK yesifaki esidala se-Arch Linux."
Ngakho-ke mhlawumbe iMarzas ikutholile kufakwe yi-CL noma mhlawumbe ufake inguqulo entsha ngoba kuze kube yizinguqulo ezimbili ezedlule ukufakwa bekunjalo
Ungalutshela usuku kusuka esithombeni?
nguyena we-Antergos 2013.05.12
Vele, sekuvele kukhona okusha ... Kusamele uzame owokugcina.
Kwami bekufanele ngifake ama-alsa-firmware driver kanye ne-Intel driver, ngoba angizilethanga, uma kungokwakho, yebo, unenhlanhla enkulu mngani wami 🙂
Sawubona, ngasohlangothini lwewebhu (uma uvula i-athikili) kuvela ingxenye yokuxhumana nabantu, kepha ngabalandeli abangu-0 be-facebook, i-twitter ne-Google +, lapho kusobala ukuthi kunezinye eziningi ze-xD
Uff, uqinisile. Benginganakile, ngiyabonga ngesexwayiso.
Okuthunyelwe okuhle. Futhi, sengivele ngilande i-Arch ISO ukuyivivinya ngakho-ke ngiphawula ngokusobala ngaleyo distro.
Zama i-Antergos 🙂
Yebo, ngithanda ukuba ngaphansi kwe-hood, futhi iSlackware ibe yinhle kimi. Ngikushiya lapha umbono wami othobekile mayelana ne-slackware, ngikwazi kanjani ukufaka i-slackware y beka ukuthinta kokuqeda ukuyisebenzisa ngaphandle kokubangela izinkinga.
Ngafaka le distro, ngangingenankinga nabashayeli be-radeon, inkinga engivelele kuphela ukuthi ukushelela kwefonti okusebenzayo kusebenza maphakathi, okungenani kimi, ezinye izinhlelo zisebenzise ukushelela, ezinye hhayi chrome izinhlamvu zazibukeka kabi.
Lokho kungalungiswa ngokuhlela Amafonti.conf
Uma kungenzeka ngingathanda ukuthi ixazululwe kusukela ekuqaleni noma kuze kufike ekugcineni ngokufaka okungapheli, angifuni ukulungisa lutho, ngoba lokho ngisebenzisa i-arch ngqo.
Haha. Futhi uzosebenzisa kangcono i-Arch esikhundleni samanye ama-distros atholakala kubo.
Ngikuthola isikhathi eside ukufaka ukungapheli, okuphelele ku- .fonts.conf kufanele unamathisele okulandelayo:
Eshu! Akusebenzi ngendlela ebengifuna ngayo, kungcono ngiyishiye lapha: http://paste.desdelinux.net/4853
Ingabe ikhona indlela yokukwenza kusuka ku-USB?
Noma bukhoma i-USB?
Yebo, kanjena: #dd if = / place / name.iso of = / place / pendrive
Kungivulela imvelo ye-gnome sengathi i-xD ebukhoma, nganoma iyiphi indlela engafani nalokho? ngoba nge-gnome 3 angikwazi ukuyifaka ku-pc haha ​​yami
Kudala ngisebenzisa iLinux futhi bengisebenzisa i-Antergos isikhathi eside, ngaphezu kwalokho, ngiyingxenye yabasebenzi abayithuthukisayo, ngicabanga ukuthi uSergio ubhekisa ekufakweni kwesisekelo okuza kwi-.ISO ngoba iyona kuphela engenayo imvelo ye-X, zonke ezinye izinhlobo, iCinnamon, i-GNOME, iRazor-Qt, i-OpenBox ne-XFCE zisebenza kahle (zikhipha imininingwane efana nokuxhaswa kwe-MTP, i-UDF nezinye)
Ngikuthole kuyi-POST eyiyo, noma ngabe iyadida futhi iyisisekelo impela, kepha isasebenza.
Ngibingelela kubo bonke futhi sibonga kakhulu ngokusisiza nge-Antergos.
Ngayifaka lapho ishintshelwa ku-Cinnarch futhi angibanga nankinga kuze kube namuhla. Okuwukuphela kwento engingikholisanga iRazor futhi ngafaka iKde kuyo futhi okuxakayo ukuthi isebenzisa inqama encane futhi ngiyibona ilula ukwedlula okunye ukwabiwa okufana neChakra, Kubuntu noma i-OpenSuse.
UFrancisco Pastor kusho
Sergio, ngiyabonga kakhulu ngegalelo lakho, nginezinyanga ezingaba ngu-4 ngino-Antergos, ngalamukela ngoba ngiqale ukuba nezinkinga ngeLinuxmint 14, bengingayazi kodwa ikhadi lami levidiyo (iRadeon HD 6290, enombono we-amd processor) ayihambisani amanye amaphakheji we-Linux, manje ngiyathola, kepha heyi ngiphinde ngathatha isinqumo ngoba ngenxa yalezi nezinye izinkundla engithole ngazo ngeRolling Release distro (awudingi ukuthi ushintshe inguqulo), lapho-ke isuselwa e-Antergos e-Arch, I Kubonakale kuyindlela enhle futhi ngoba inobungani (amanye ama-distros anzima kakhulu kimi), ngikwazile ukusebenza cishe nawo wonke amaphakheji, kepha angikwazi ukufaka idivayisi yami ye-HP multifunctional, sengivele ngazama ama-tutorials amaningana futhi kuskena isithwebuli kuphela esisebenzayo, kepha Akunaphrinta, ngine-hp manager efakiwe, yini engilahlekile? Ngisebenzisa ngokunenzuzo futhi ngiphawula ukuthi isithangami se-Antergos ngeSpanish asisihle neze, ngakho-ke lokhu okuthunyelwe kwakungilungele kakhulu, ngiyabonga.
Phendula uFrancisco Pastor
Buza umbuzo wakho ku
Nginenkinga engingazi noma ngabe kukhona omehlele, izolo ngifake i-Antergos ngeXFCE nakho konke okuvela kumama, kepha angifaki noma iyiphi i-USB noma ipeni hard disk.
Ngikhumbula inkinga efanayo ephawulwe ngomunye umsebenzisi kepha hhayi isixazululo.
Cinga ku- http://forum.antergos.com/ futhi uma ungakutholi okuthunyelwe, thumela futhi.
Ngokuzenzakalelayo, i-Antergos ayizi nokuxhaswa kwe-MTP, GVFS noma i-FUSE, ngincoma ukuthi ufake amaphakheji ukuze ube nokusekelwa okwanele kuyo yonke into eyi-USB ne-Massive Storage
Ngiyabonga kakhulu, ngiyibuyisele futhi yonke into ibiphelele.
Sawubona, ngisanda kufaka ama-antergos ku-dual-boot ngamawindows vista futhi uma ngiqala ukungena ku-grub ngithola kuphela ama-antergo. Lokho okumele ngikwenze?
Siza, ngasizathu simbe ngiqedile ukufaka, ngakuqala kabusha, futhi kungikhombisa i-grub, ngikhetha i-linux bese kuvela ezinye izinhlamvu eziyinqaba, bese belayisha eminye imibhalo mayelana ne-Intel bese beqala ukulayisha ... ihlala esikrinini esimnyama nesikhombi segundane kuphela ku isikrini ... asenzi lutho olunye ... ngihambisa isikhombisi ngaphandle kwezinkinga kepha akukho lutho olilayishayo ...
Sawubona, ngikuqinisekisa kanjani ukulanda nge-sha1sum, uma ngingalutholi uhlu lwe-sha1sum?
Ikhadi leBroadcom BCM4313 alisebenzi kuDebian Jessie noKernel 3.10? Lesi yisixazululo